China Metal Lawn Ornaments Arch Sculpture Metal Yard Decorations Voalamina Art Sculpture orinasa sy mpanamboatra | Piedra
Varavarankely voaravaka ravin-kazo vita amin'ny metaly
Model No: MES11
Ho tohina amin'ity haingon-trano vita amin'ny vy metaly ity ve ianao? Sary sokitra vy no nanamboarana azy. Sarivongan'ny kanto vita poloney ity izay azo apetraka ho firavaka ahitra. Afaka maka sary vitsivitsy amin'ity sary sokitra mahavariana ity ianao. Tena misy gloss be dia be raha oharina amin'ny fitaovana hafa. Maninona raha mividy iray ho haingon-trano ao an-jaridainanao.
Anaran'ny vokatra: Sary sokitra metaly
Toerana niaviany: Xiamen, Sina (Mainland)
Isa isa: MES11
Color: Mitovy amin'ny sary na namboarina
Size / lafiny: fanao
Quantity Order Minimum: 1 Piece
Type package: Trano vita amin'ny tabilao misy plastika misy fo ao anatiny
Fe-potoana: 35 andro
Ora nanomezana: Araka ny fomba fandefasana sy ny alehan'ny firenena vahiny
Raisinay ny fangatahana fanamboarana mahazatra raha manantitrantitra ny famolavolana nataonao tany am-boalohany ianao .Mifandraisa aminay ary omeo anay ny mombamomba ny fangatahana volavolao. Misaotra anao!
Stainless Steel Sculpture Process famintinana:
1) fanaovana sary sokitra tanimanga
2) Fanamafisana lehibe araka ny modely tanimanga
3) Manamboatra vy vy tsy tapaka
4) Fitotoana ny sary sokitra rehefa noforonina ny endrika iray manontolo
5) Ny fitsaboana any ivelany toa ny fako na ny fitaratra mirehitra, ny vatosoa,
sary hosodoko, loko sns.
1.Any ahonquiry hovaliana ao anatiny 24 ora.
Azonao atao ny mandefa ny mailaka amin'ny SALES1@brandsculptures.com, miantso ny Hotline, na hifandraisa aminay amin'ny whatsapp, facebook, wechat, hovalianay ianao raha haingana.
2. Serivisy namboarina maimaim-poana.
Raha efa misy ny sary famolavolana avy aminao, dia hataonay ireo vokatra araka ny sary nalefanao anay.
Raha mbola tsy nisy sary nataonao, azafady mifandraisa aminay, hisy ekipa mpamorona matihanina amin'ny serivisinao.
Azontsika atao ny manamboatra azy io araka izay tianao.
3.Wmarary lazao ny mpanjifa tsirairay dingana mandritra ny tny fizotran'ny famokarana.
Azontsika atao ny maka sary na sary momba ny dingana rehetra amin'ny famokarana, ny fonosana ary ny fitaterana raha ilainao izany rehetra izany.
4.We afaka manome ny vokatra tsara indrindra sy ny lehibe fanompoana.
Ny sary sokitra rehetra dia homena kalitao sy kalitao mendrika. Ary afaka mifandray aminay ianao amin'ny fotoana rehetra raha sendra misy olana amin'ny sary sculpture.Out serivisy serivisy ho avy eto ianao hamaly.
5. Torolàlana momba ny fametrahana voafaritra
Homena anao ny fomba fametrahana sary sokitra rehetra. Ho an'ny tetikasa lehibe, azonay atao ihany koa ny mandefa ny ekipan'ny mpiasa any ivelany ho any amin'ny toeranao, ary manampy anao hametraka ilay tetikasa raha mila izany ianao.
Previous: Drafitra vita amin'ny sary sokitra lehibe amin'ny sarivongana metaly volamena
Manaraka: Recycle Metal Yard Zavakanto Volavola vy ivelan'ny alàlan'ny sary sokitra Square Garden
Modely amin'ny fitaratra maoderina Art Stainless Steel Sculp ...
Zavakanto-biby miavaka sary sokitra lion S ...
Mahatalanjona sary sokitra soavaly metaly any ivelany ...